Ny soavaly arabo ve no karazany madio sy antitra indrindra? | Soavaly Noti
Ny soavaly arabo ve no karazany madio sy antitra indrindra?
rose sanchez | | Karazan-tsoavaly
Araka ny voalazan'ny mpahay tantara dia Ny soavaly arabo no karazany tranainy sy madio indrindra izay misy firaketana. Hazakazaka lahimatoa izay tsy avy amin'ny firazanana hafa. Na dia teo am-piandohany aza dia tsy dia nohajaina toy ny tamin'ny am-polony taona faramparany.
Ny hazakazaka arabo tany am-piandohana dia nampiasaina ho soavaly soavaly ho an'ny fanoherana. Taty aoriana dia nafangaro tamin'ny hafa karazana mifangaro fa manjaka hatrany ny ran'ny soavaly arabo.
Ny tantara dia milaza fa ny soavaly arabo voalohany dia tonga tany India teny an-tanan'i Marco Polo. Nandoa ny mpivarotra vola be ho an'ireto specimens ireto. Betsaka ihany koa ireo sambo tonga tany amin'ny seranan-tsambo, indrindra ny avy amin'ny Golfa Persiana, feno santionany Arabo.
Ny Mongola dia tia ny soavaly tsara sy ny hakantony. Saingy, tamin'ny taonjato faha-XNUMX vao nanjary nahalala ny tena fampidirana ilay soavaly Arabo fanafarana avy any Golfa, Iran ary Iraq. Nojerena bebe kokoa ny hafainganam-pandehany, noho izany dia raisina ho karazana tena izy, amin'ny hazakazaka, noho ny hakingany tokoa.
Io dia fotony voalohany, tsy avy amin'ny hafa. Izy dia manana ny fanomezana, izay hazakazaka tena izy ihany no mizara, ny famerenany tanteraka ny lova navelany sy ny fahaiza-manao ataovy amina hery hafa tsy azo toherina ny toetranao amin'ny firazanana hafa. Ny Arabo no loharano lehibe sy mendrika indrindra amin'ny hazakazom-pirenentsika, amin'ny karazan'olona tsara indrindra any Afrika Avaratra ary amin'ireo karazana maivana eto amin'izao tontolo izao, hoy i Lady Wentworth, mpiompy soavaly arabo madio.
Izany no antony iantsoana ny Arabo ny rain'ny firazanana rehetra. Satria io ihany no karazany tena madio, tsy voavily. Ny sasany amin'ireo hazakazaka niforona dia haingana kokoa, lehibe kokoa, mitsambikina kokoa. Saingy tsy misy manana ny hatsarany, ny toetrany, na ny tombokavatsa misy azy na ny mampiavaka azy manokana.
Ny anjara asany teo amin'ny tantara dia ekena satria ny rany dia ao anatin'ny hazakazaka maoderina indrindra soavaly. Azo lazaina fa amin'izao andro izao ny tsipika arabo dia hita amin'ny saika karazana soavaly mitaingina rehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Soavaly noti » ny hafa » Karazan-tsoavaly » Ny soavaly arabo ve no karazany madio sy antitra indrindra?
Rafael Zamora Tulliano dia hoy izy:
Ny lahatsoratra momba ny tena tantaran'ny soavaly arabo dia tena tsotra, raisina ho ny hazakazaka soavaly madio indrindra eto an-tany, indrindra ny soavaly arabo persiana antsoina hoe karazana madio indrindra.
Misy lahatsoratra novakiako tao amin'ny boky iray izay nantsoin'ny soavaly amerikana hoe MUSTANG. Ity karazan-kazo ity dia ny fiompiana mahatoky ireo karana amerikana amerikana. Ny PINTO malaza dia haingana sy mahatohitra ka nahazo hafainganam-pandeha mihoatra ny an'ny soavaly hazakazaka.
Valiny tamin'i Rafael Zamora Tulliano
Holsteiner, hazakazaka ra antonony
Microchip amin'ny soavaly